चिन्ता कम गर्नुहोस् - यो प्राप्त गर्न को लागी उत्तम कुञ्जीहरु बेजिया
चिन्ता कम गर्ने कुञ्जीहरु
सुसाना Godoy | 12/09/2021 18:00 | मनोविज्ञान
थाहा छैन कसरी चिन्ता कम गर्ने? निस्सन्देह यो केहि गर्न को लागी धेरै सरल छैन तर यो कदम वा कुञ्जीहरु को एक श्रृंखला छनौट गर्न को लागी हामीलाई हाम्रो जीवन र हाम्रो दिमाग मा नियन्त्रण गर्न को लागी मद्दत गर्न को लागी हो। तेसैले, हामी तपाइँलाई ठूलो मद्दतको साथ छोड्छौं कि तपाइँ जति सक्दो चाँडो अभ्यासमा राख्नु पर्छ।
कहिलेकाहीँ यो हाम्रो जीवन र यो मा आश्चर्य द्वारा प्रकट हुन्छ प्रमुख समस्या वा आतंक हमला को लागी नेतृत्व गर्न सक्छ कि हामी पनि हुन सक्छौं जब हामी कम्तीमा यो अपेक्षा गर्दछौं। त्यसोभए, यो सबै हुनु भन्दा पहिले, हामी व्यापार को लागी तल जानु पर्छ। यो समय हामी सबै भन्दा राम्रो तरिका मा कसरी समस्या मा हमला गर्न को लागी हो।
1 सधैं आफ्नो जीवन मा प्राथमिकता
2 यति धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्
3 सधैं आफ्नो भावनाहरु लाई व्यक्त गर्नुहोस्
4 हरेक दिन समय लिनुहोस्
5 चिन्ता कम गर्न को लागी पर्याप्त आराम पाउनुहोस्
सधैं आफ्नो जीवन मा प्राथमिकता
त्यहाँ चीजहरु छन् कि एक दिन बाट अर्को गर्न सकिदैन, तेसैले, हामी साना तर सुरक्षित कदम चाल्नु पर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये एक यो हो। चिन्ता प्रकट हुन्छ जब हामी पहिले नै तनाव संग संतृप्त छौं, जब हामी यसलाई अब लिन सक्दैनौं र हाम्रा तंत्रिकाहरु सतह मा छन्। तेसैले, यो सधैं रोक्न र सोच्न को लागी राम्रो छ। किनकि सबै कुराको आधार के साँच्चै महत्त्वपूर्ण छ प्राथमिकता दिन को लागी हो र हामी यसलाई बाहिर लैजानु पर्छ। के छैन, पर्खन सक्छ किनकि हाम्रो स्वास्थ्य पहिले आउँछ। तेसैले, हाम्रो दिन को आधार संगठन मा छ।
यति धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्
यदि तपाइँ सोच्नुभएको सबै कुरा पूरा गर्न को लागी समय मा आउनुहुन्न, चिन्ता नगर्नुहोस्। किनकि हामी सबैको सीमा छ र तपाइँ उनीहरु लाई पार गर्नु हुदैन यदि हामी पहिले नै थाहा छैन के हाम्रो पर्खाइमा छ। यो सकारात्मक सोच्न को लागी राम्रो छ, किनकि यदि यो एक समाधान छ, के यति धेरै चिन्ता को उपयोग छ? र यदि तपाइँसँग यो छैन, तब यो आवश्यक छैन। हामीले ती नकारात्मक विचारहरु लाई प्रवाह गर्न दिनु पर्छ किनकि अन्यथा, उनीहरु हाम्रो टाउको मा बसोबास गर्नेछन् र यो अगाडि बढ्न धेरै गाह्रो हुनेछ।
सधैं आफ्नो भावनाहरु लाई व्यक्त गर्नुहोस्
कि हामी भित्र के छोड्छौं जुन हामी सधैं महसुस गर्छौं या त राम्रो कुरा होइन। तेसैले, बाह्यकरण यो सधैं सुविधाजनक छ। यदि तपाइँ सक्नुहुन्छ, तपाइँको आफन्तहरु वा ती विशेष व्यक्तिहरु संग तपाइँको जीवनमा भन्दा राम्रो भन्दा राम्रो केहि छैन। यदि होईन, एक विशेषज्ञ व्यक्ति जस्तै तपाइँलाई सबै भन्दा राम्रो सल्लाह दिनुहुन्छ जस्तो केहि छैन। तर एक तरिका वा अर्को तपाइँ धेरै राम्रो महसुस गर्नुहुन्छ यदि तपाइँ यसलाई बाहिर लिनु भन्दा बाहिर यो भित्र छोड्नु भन्दा। पक्कै तपाइँ पहिले नै थाहा छ, तर यो सधैं यो अभ्यास मा राख्न को लागी सजिलो छैन र हामी यो जान्दछौं। यदि यो तपाइँ लागत, पहिलो भावनाहरु लेख्न को लागी प्रयास गर्नुहोस् र तपाइँ देख्नुहुनेछ कि यो राम्रो महसुस गर्न को लागी पहिलो कदम हो।
हरेक दिन समय लिनुहोस्
तपाइँसँग धेरै समय नहुन सक्छ तर राम्रो कुरा यो हो कि हामी सधैं आफैंलाई केहि मिनेट हुनु पर्छ। उनीहरु मा तपाइँ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँ सबैभन्दा मनपर्छ, एउटा खेल खेल्न बाट संगीत सुन्न। केहि जसले तपाइँलाई अझ राम्रो महसुस गराउँछ, तपाइँलाई आराम दिन्छ, र तपाइँलाई जारी राख्न को लागी पर्याप्त ऊर्जा दिन्छ। जस्तो कि तपाइँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो जटिल कदमहरु उठाउन को लागी आवश्यक छैन, तर हरेक दिन एक सानो प्रयास गर्न को लागी प्रतिज्ञा गरिएको थियो पूरा गर्न को लागी। र हाम्रो लागि समय धेरै छ।
चिन्ता कम गर्न को लागी पर्याप्त आराम पाउनुहोस्
निस्सन्देह, जो मानिसहरु चिन्ता कम गर्न चाहान्छन् सधैं एक राम्रो रात को निद्रा छैन। अनिद्रा उपस्थित हुन सक्छ र अर्को नकारात्मक भाग हो ताकि चिन्ता एक समस्या हुन जारी छ। तेसैले, हामी हरेक दिन केहि बानीहरु लाई स्थापित गर्नु पर्छ, यी कार्यक्रम को एक मामला मा बनाए राख्नु पर्छ। किनभने मात्र तब शरीर यो धेरै राम्रो संग बानी हुनेछ। तर हो, जब हामीलाई सुत्नमा समस्या हुन्छ, हामीले बूढो मानिसहरुमा कदम चाल्नु पर्छ जस्तै एक प्रशस्त डिनर नगर्ने, सुत्नु भन्दा पहिले एक आराम नुहाउने वा उपकरणहरु को सबै प्रकार को बन्द। तपाइँ देख्नुहुनेछ कि कसरी यस तरीकाले र सबै चरणहरु को योग संग, तपाइँ चिन्ता लाई कम गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँको चिन्ताहरु लाई अलि टाढा राख्न को लागी सिक्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » मनोविज्ञान र जोडी » मनोविज्ञान » चिन्ता कम गर्ने कुञ्जीहरु
झींगा संग आलु र तोरी संग अण्डा Scrambled